‘बी’ डिभिजन लिग: आरसिटी विजयी
काठमाडौँ, १७ फागुन । शहीद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग फुटबलअन्तर्गत आज भएको दोस्रो चरणको रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसीटी) विजयी भएको छ ।
एन्फा मैदान सातदोबाटोमा भएको खेलमा आरसिटीले टुसाल युवा क्लबलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित ग¥यो । आरसिटीलाई जीत दिलाउन उनम बुढाथोकीले दुई गोल गरे । टुसालका करण रावतले एक गोल फर्काए । खेलको ३१औँ मिनेटमा उनमले गोल गर्दै आरसिटीलाई शुरुआती अग्रता दिलाए । ७६आँैं मिनेटमा करणले गोल गर्दै टुसाललाई १–१ गोलको बराबरीमा फर्काए । खेलको ८२औँ मिनेटमा उनमले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै आरसिटीलाई २–१ को जीत दिलाए । जीतसँगै आरसिटीले तीन अङ्क जोडेको छ ।
बाह्र ‘बी’ डिभिजन क्लब सहभागी उक्त प्रतियोगिताअन्तर्गत दुवै समूहका विजेता र उपविजेता अन्तिम चारमा छनोट भएपछि अन्तिम चरणक खेलहरु आजदेखि एन्फा मैदानम शुरु भएको हो । पहिलो चरणमा सहभागी १२ क्लबलाई दुई समूहमा विभाजन गरेर लिग खेलाइएको थियो । त्यसपछि दुवै समूहको शीर्ष दुई स्थानमा रहँदै सातदोबाटो युथ क्लब, श्री भगवती युथ क्लब, टुसाल युथ क्लब र आरसिटी क्लब अन्तिम चारमा पुग्न सफल भएका थिए ।
यस्तै फागुन १९ गते टुसाल र श्री भगवती तथा सातदोबाटो तथा आरसिटीबीच हुनेछ भने २१ गते आरसिटी र श्री भगवती तथा सातदोबाटो र टुसला क्लबबीच खेल हुनेछ । छ खेलपछि सबैभन्दा धेरै अङ्क जोड्ने क्लब च्याम्पियन हुनेछ । गत माघ २५ गतेदेखि शुरु भएको प्रतियोगितामा ‘बी’ डिभिजनका १२ क्लब झम्सिखेल युवा क्लब, आरसिटी, श्रीकुमारी क्लब, सातदोबाटो युथ क्लब, नयाँबस्ती युवा क्लब र ब्वाइज युनियन, टुसाल, पुल्चोक, मध्यपुर युथ एशोसिएशन, खुमलटार युवा क्लब र श्री भगवती क्लबले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । लिगको विजेताले रु आठ लाख पाउनेछ । उपविजेताले रु पाँच लाख, तेस्रो हुनेले रु तीन लाख र चौथो हुने टोलीले रु दुई लाख पाउनेछन् । लिग रेलिगेशनबिनाको हुने लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिनुभयो । रासस
मुल्मीको नेतृत्वमा स्नुकर सङ्घ
नेपाली सेनासँग कस्ता -कस्ता हतियारहरू छन् ? जान्न चाहानुहुन्छ ?? (भिडियो हेर्नुहोस्)